New Ukubulawa Drug Takes 10 Amaminithi ukusibulala umbulali - Izindaba Rule
Ukufa-penalty (Photo credit: Wikipedia)
Lokhu November 30, 2009 isithombe sikhombisa egumbini ukubulawa kwabo “indlu ukufa” eSouthern Ohio Correctional Facility in Lucasville, Ohio
Umbiko we-US umbulali washikashikeka futhi emangele ngoba umoya okungenani 10 imizuzu njengoba yena wabulawa ekukhipheni isahlulelo esathatha isikhathi eside kusetshenziswa impikiswano entsha izidakamizwa Cocktail, ngokusho ofakazi.
Intatheli ngoba Columbus Dispatch iphephandaba samanje ngesikhathi kubulawa Dennis McGuire oneminyaka engu-53 ubudala libike ukuthi umbulali Ohio ezenziwe “ukukhefuzela futhi kokuziklinya” umsindo njengoba wawela.
Ohio izikhulu etshela abezindaba ze-AFP ukuthi McGuire, isigwebo sentambo ngo 1989 ngoba ukudlwengula nokubulala owesifazane owayekhulelwe, Ushonele 10:53 am (1553 GMT).
Izintatheli owabona ukubulawa uthe izidakamizwa kule ngomjovo obulalayo engazi ayeseqalile esizosingathwa 24 imizuzu ngaphambili at ejele Lucasville.
Ngaphansi a Ohio protocol entsha, McGuire wabulawa usebenzisa cocktail ezakha midazolam sine futhi hydromorphone analgesic, inhlanganisela never ngaphambili e-United States.
The new ukubulawa protocol laqanjwa ngemva Ohio nezinye US lithi mayibambe isigwebo sokufa waqala ukugijima aphume barbiturates lapho abakhiqizi European wayeka ngibanika.
abameli McGuire sika babeye bamelana indlela ngokubulawa, ethi umbulali wayezofa of asphyxia in into eyaziwa ngokuthi “air ukulamba,” kubabulali uhlobo lwezinto isijeziso esinesihluku futhi engavamile kwenqatshelwe ngaphansi US uMthethosisekelo.
Kodwa lapho bedlulisela amacala, okuyinto wahamba yonke indlela eya INkantolo Ephakeme, zenqatshiwe.
Ijaji sikahulumeni e-Ohio, Gregory Frost, wathi “ubufakazi ngaphambi kwenkantolo yehlulekile nengozi engoba ukuthi McGuire uzozibonela ubuhlungu obunzima.”
Izintatheli owayebukele ngoLwesine abulawe wathi McGuire okungabonakala angafi njengoba yena wabulawa.
Ngokusho the pool izintatheli, kwaba ukubulawa omude kunayo yonke kusukela Ohio kabusha yethulwa isigwebo sokufa in 1999.
“Ngezithuba zehora 10:33 am, McGuire waqala ngizabalaza futhi gasping loudly umoya, okwenza ukukhefuzela futhi kungaminyezeli umsindo eyathatha okungenani 10 amaminithi, ngezinhlungu esifubeni sakhe ugonyuluka futhi clenched yakhe ngenqindi,” the-Columbus Dispatch ibike.
“Deep, umsindo Imoto yayisikhahlameza eyaphuma emlonyeni wakhe. Kule minyaka engu-izikhathi eziningana ufile ngaphambi kokuba, wayesekhona.”
Isigwebo sentambo ochwepheshe lizwakalise ukukhathazeka mayelana nemininingwane ukufa McGuire sika, bathi waveza indlela sokufa owawungumnyaka “kwenqubomgomo kanye eziyinkinga.”
“Uma sicabanga ubude futhi iphazamisa izincazelo kokubulawa Dennis McGuire sika, ngaphezu uhla izinkinga ngomjovo obulalayo engazi libike kwezinye uthi, kubonakala ukuthi inqubo ngomjovo obulalayo engazi lokhu lezwe liyizo kwenqubomgomo xaxa futhi eziyinkinga kunangaphambili bekulokhu,” Deborah Denno, kusukela FORDHAM University School of Law, etshela abezindaba ze-AFP i-imeyili.
Maya Foa, Umqondisi weqembu isigwebo sentambo ngesikhathi Umoya non-profit group, osolwa Ohio iziphathimandla yokungazinaki isazi iseluleko.
“Ohio waxwayiswa ngokuholela ochwepheshe ukuthi ukuzama on abantu ngale ndlela engcupheni ngibenza ukuhlupheka izinto ngokungathi sína, futhi ubufakazi bubonisa ukuthi lolu iye kufakazelwa,” Foa esitatimendeni.
“Bangaki nokubulawa owalimala kudingeka sibone phambi kwababulali uyeke ukusebenzisa abantu njengoba Guinea izingulube?”
kokubulawa ngoLwesine kwaba yesibili eyenziwa kulo nyaka yi-US iziphathimandla ngokusebenzisa imikhiqizo emisha eyabonakala zabangela ukuhlupheka of wabalahla.
ngoJanuwari 9 e Oklahoma, killer akulahlwa Michael Lee Wilson uthe bazizwa yakhe “wonke esivuthayo umzimba” njengoba yena wabulawa.
Wilson wabulawa isebenzisa inhlanganisela yemithi kuhlanganise pentobarbital, ikhemikhali ngokuvamile lisetshenziselwa euthanize izilwane.
Nokho, lezi izinhlobo izidakamizwa manje zinyatheliswa kuphela by Pharmacy ukuthi zibuswa umthetho wendawo ufuna, kunokuba nabalawuli federal.
A scandal yaqubuka kabusha November 2012 eMassachusetts, lapho ukungahlanzeki kwenye yalezi Pharmacy bikho njengoba imbangela obulalayo meningitis ukugqashuka.
McGuire iyindoda wesithathu ukuba abulawe United States kulo nyaka. Ohio uyabulawa amathathu othi 39 abantu abulawe e-United States ngonyaka odlule, ngokusho iseli elihlanganisiwe Information Center.
Lesi sihloko, New ukubulawa izidakamizwa kudinga 10 imizuzu ukusibulala umbulali, is yedlanzana kusukela AFP futhi posted lapha nge imvume. Imininingwane 2014 AFP. Wonke Amalungelo Agodliwe
59156	8 I-united states
← 10 Amathiphu Simple zokuthuthukisa Okuhlushwa Yakho Iculo le-Cigarettes Ngini Dangerous Kunanini, US mbiko uyaxwayisa →